I-UltraSMSScript: Thenga i-SMS Ephelele, i-MMS, nePlatform Yokumaketha Ngezwi Nge-API | Martech Zone
I-UltraSMSScript: Thenga i-SMS Ephelele, i-MMS, nePlatform Yokumaketha Ngezwi Nge-API
NgoLwesine, Juni 2, 2022 NgoLwesine, Juni 2, 2022 Douglas Karr
Ukuqala isu lomlayezo wombhalo kungaba inqubo yokuqalisa enzima. Uyakholwa noma ungakholwa, izinkampani zenethiwekhi ikakhulukazi zisebenza ngezandla nanamuhla... hambisa amaphepha, ukugcinwa kwedatha yakho kanye nezinqubomgomo zobumfihlo zibuyekeziwe, futhi uphume ngemvume kuzimvume ze-SMS. Angizami ukubukela phansi ukubaluleka kokuthobela le ndlela, kodwa ukukhungatheka kokufuduka noma ukuhlanganisa isixazululo se-SMS kungase kukhungathekise kakhulu kumkhangisi osekelwe emvume, osemthethweni.
Inqubo yokumaketha nge-SMS iyinkimbinkimbi impela. Amapulatifomu amaningi e-SMS, isibonelo, enza hhayi ukuxhumana nokuhlanganisa ngqo nabathwali be-SMS. Ngokuvamile kunendawo yokumaketha ye-SMS noma yezokuxhumana exhumana nensizakalo ebese ixhuma esangweni lomyalezo elithumela umyalezo kulowo ophethe.
Nakuba inkundla ye-SMS ingase ibe emangalisayo, ithembele kusango lomlayezo we-SMS ukuze uhlelo lwayo lusebenze. Ngokombono wamanani, lokho kusho ukuthi ukhokhela isofthiwe yakho, ukhokhela izimali zokuthumela imiyalezo endaweni yakho, ungase ukhokhele ukuthola amagama angukhiye engeziwe, bese ukhokhela izimali zokuthumela imiyalezo esangweni lomlayezo. Izindleko ze-SMS zingaqhuma ngokushesha... ikakhulukazi njengoba abathengi bamukela i-SMS kaningi ukuze baxhumane namabhizinisi.
Ekupheleni konyaka odlule, abathengi abayizigidi ezingama-48.7 bazobe sebekhethe ngokuzithandela ukuthola ukuxhumana nge-SMS kusuka kumikhiqizo yabo abayithandayo. Abathengi abangama-70% bacabanga ukuthi ukumakethwa kwe-SMS kuyindlela enhle yokuthi amabhizinisi athole ukunakwa kwawo. Abantu abangama-82% bathi bavule yonke imiyalezo abayitholayo.
ULauren Pope, Izibalo Zokumaketha ze-SMS ezingama-45 Amakhasimende Akho Afisa Wazi
Kunamasango ama-SMS aqinile futhi angabizi kakhulu ongabhalisela wona futhi uwasebenzise ngqo ngama-API anamandla, kufaka phakathi I-Twilio, Plivo, Telnyx, SignalWire, Nexmo, Ytel, kanye ne-Bandwidth. Lezi zingxenyekazi zinamakhithi wonjiniyela wesoftware axhuma kuma-API aqinile ukukusiza ukuthi uthuthukise ipulatifomu yakho ye-SMS noma ukuhlanganiswa ngendlela ongathanda ngayo. Ngeshwa, noma kunjalo, lokho kudinga ubuchwepheshe bokuthuthuka, ingqalasizinda, nokunakekelwa okuqhubekayo.
I-UltraSMSScript: Thenga futhi wenze ngezifiso ipulatifomu yakho yokuthumela imiyalezo nge-SMS
Enye indlela engabizi kakhulu yokuthuthukisa inkundla yakho yemiyalezo ye-SMS noma ukukhokha imali yelayisense yanyanga zonke endaweni ye-inthanethi ukuthenga ikhodi bese uyiqhuba kungqalasizinda yakho. Lokhu kungakusiza ukuthi uvuke futhi usebenze ngokushesha futhi uqinisekise ukuthi inkundla yakho iyathobela, iphephile, futhi izinzile. I-UltraSMSScript isofthiwe enelebula elimhlophe ene-API ongayithenga futhi uzifake yona bese usebenzisa noma yimaphi amasango e-SMS. Azikho izinkokhelo eziqhubekayo futhi ukhokha izinkokhelo ze-SMS ezithengekayo njengoba usebenza ngokuqondile nesango.
Izici ze-UltraSMSScript zifaka phakathi
Amakhuphoni Eselula - Dala amakhuphoni amahle weselula ukuze uwathumele kumakhasimende akho. Ziyindlela enhle yokwakha isisekelo samakhasimende athembekile ngenkathi futhi zivuza amakhasimende akho amanje. Isigqebhezana ngasinye senziwe ngezifiso ngokuphelele futhi sifaka izilungiselelo nezici eziningi ezikuvumela ukuba uguquguquke nokuthi ufuna ukusetha kanjani.
Ama-Q & A SMS Bots - Dala imibuzo ezenzakalelayo ye-SMS nezimpendulo ezikhahlelwa ngokuthumela imiyalezo ngegama elingukhiye. Ungakha imibuzo eminingi ngokulandelana ngendlela ofuna ngayo. Ilungele ukwesekwa kwamakhasimende, imibuzo, ukuqoqa impendulo ebalulekile, nokukhulisa uhlu lwakho.
Thumela i-Bulk SMS - Enhliziyweni yomkhankaso wokumaketha we-SMS yikhono lokuthumela imiyalezo ye-SMS ngobuningi kubabhalisile bakho. Thumela eqenjini eli-1 noma amaqembu amaningi ngasikhathi sinye! Thumela imilayezo kumakhasimende akho ukumemezela amadili noma izaphulelo ofuna ukuzinyusa ezingaletha ibhizinisi elikhulu.
Amagama angukhiye angenamkhawulo weSelula - Ikhono labasebenzisi lokuzibandakanya ekukhangiseni kwamagama angukhiye. Amagama angukhiye eselula ayingxenye yemikhankaso yokumaketha yamaselula ukuze ahehe imakethe ethile eqondiwe. Uthola ukufinyelela kumagama angukhiye angenamkhawulo! Abantu bangabhalisela ukumaketha kwakho kombhalo ngokuthumela igama elingukhiye.
Ukuhlela i-Bulk SMS - Ukuhlela imilayezo ngezikhathi ezithile kuyindlela enhle yokuqinisekisa ukuthi amakhasimende akho ngeke akhohlwe ngawe. Isikripthi sethu sikuvumela ukuba ube nokulawula okugcwele kokuthi imilayezo ye-SMS ithunyelwa nini ukuze ukwazi ukuhlela imilayezo kusasele izinyanga.
Abaphendula ngokuzenzakalela - Ngemuva kokuthi umuntu ajoyine uhlu lwakho lwababhalisile, thumela ngokuzenzakalela umyalezo owenziwe ngokwezifiso. Ungasetha futhi ama-autoresponders ukuthi athumele i-SMS ngokuzenzakalela kubabhalisile ngemuva kokuthi babhalise kusheduli esethiwe njengabasebenza ngama-imeyili autoresponders.
Thumela i-MMS / Imibiko Yezithombe - I-MMS iletha okuhle kakhulu kwe-imeyili nokuphuthuma kwe-SMS ekuxhumaneni kwamakhasimende akho. Penda isithombe sonke ngemidiya ecebile kuyo yonke ifoni ephathekayo, ngamanani avulekile acishe abe ngu-100% nezikhathi zokuphendula okusheshayo.
Ingxoxo ye-2-Way SMS - 2-indlela SMS wengxoxo lebhokisi wena noma umnyango wakho kwamakhasimende kumakhasimende akho mobile, nge-SMS. Hlanganisa impendulo ebalulekile futhi wenze ukuxhumana namakhasimende akho umgwaqo o-2-way, konke nge-SMS nge-interface esheshayo yesithunywa!
Ama-Akhawunti Angaphansi - Unamalungu eqembu ofuna ukuwaphathisa umsebenzi kumamojula ahlukahlukene ngaphakathi kwepulatifomu futhi ubanikeze ukufinyelela kuzici ezithile kuphela? Ungakwenza lokho ngama-akhawunti ethu angaphansi!
Imilayezo Evela Njalo - Udinga ukuhlela uchungechunge lwemiyalezo ngokuphindaphindiwe? Ungaphinda imicimbi nsuku zonke, masonto onke, nyanga zonke, kanye nonyaka, kanye nemvamisa yaleyo micimbi ehleliwe (nsuku zonke, njalo ngosuku lwesi-2, njalo ngosuku lwesi-5, kanye ngeviki, njalo emavikini angu-2, njll...)
Imincintiswano ye-SMS - Dala imincintiswano ye-SMS njengendlela yokuzibandakanya futhi uklomelise amakhasimende akho amanje ngenkathi futhi uwasebenzisa njengethuluzi elihle lokukhulisa uhlu lwakho. Akukho okubaluleke njengokugcina amakhasimende akho ejabule futhi ukhulisa uhlu lwakho ngesikhathi esisodwa!
Usuku Lokuzalwa Wishes - Qoqa kalula izinsuku zokuzalwa oxhumana nabo lapho babhalisela uhlu lwakho. Ngemuva kwalokho, ngosuku lwabo lokuzalwa noma nenani lezinsuku ezithile ngaphambili, uhlelo lwethu luzobathumela ngokuzenzakalela umyalezo wakho wombhalo wosuku lokuzalwa.
Ukuhlanganiswa kwe-Facebook - Amandla wokwabelana ngomlayezo wakho ekhasini lakho le-Facebook! Sabalalisa igama futhi wandise ukubamba iqhaza phakathi kwabalandeli bakho abakunike amandla okukhulisa ababhalisile bakho ngokwabelana ngemiyalezo yakho ku-akhawunti yakho ye-Facebook.
Izibalo Zokulethwa Kwe-Bulk SMS - Buka izibalo ezinemininingwane njenge-# yemilayezo ephumelele, # yemilayezo ehlulekile, nesizathu sokuthi umlayezo wehlulekile, futhi uvumele umsebenzisi ukuthi asuse noma yibaphi ababhalisile ohlwini abahlulekile ukwamukela imilayezo.
Imininingwane Yomkhankaso Oningiliziwe - Landela umkhankaso wakho ukuze ubheke ngokujulile ukuthi yimaphi amagama angukhiye enza izingodo ezihamba phambili, ezinemininingwane ye-SMS, nababhalisile abasha nabangabhalisile esikhathini esithile.
Amawijethi Wokubhalisa Iwebhusayithi - Vumela abathengi abangaba khona ukuthi bajoyine uhlu lokumaketha lwe-SMS ngokusebenzisa ifomu elisekelwe kuwebhu elibekwe kuwebhusayithi. Lokhu kunikeza enye futhi indlela engabizi ukufinyelela nokuheha abathengi abasha.
Ukuvota kwe-SMS - Dala okhethweni lokuvota ukuze ugcine ababhalisile bakho bazibandakanye futhi banentshisekelo kulokho okufanele unikele ngakho futhi uqoqe imininingwane ebalulekile futhi uthole ukuqonda kulokho abakufunayo nabakudingayo kuwe.
Isakhi sekhasi leSplash - Iphelele kubasebenzisi abafuna ukudala amakhasi abo ngevidiyo, izithombe, noma i-HTML bese bethumela lawo ma-URL wamakhasi ohlwini lwabo ababhalisile ukuze babuke. Ifakwe isihleli esigcwele se-HTML.
Izikhumbuzi Zokuqokwa - Hlela futhi uthumele izikhumbuzi zokuqokwa kumakhasimende akho uqinisekise ukuthi ngeke bakhohlwe ngokuqokwa abakwenzile. Sesha oxhumana naye bese uhlela kalula i-SMS ukuze uphume uye kubo.
Ukunciphisa Isixhumanisi Esakhelwe ngaphakathi & Ukulandelela - Unenketho yokunciphisa izixhumanisi zakho ukuze zingathathi izinhlamvu eziningi emibhalweni yakho yombhalo futhi zilandelele nokuthi zingaki izinkinobho ezenzelwe isixhumanisi esinikeziwe ukuze ubone ukuthi umyalezo wakho usebenze kangakanani. Ithuluzi elincane eliwusizo kakhulu!
Izinombolo Zendawo - Hlanganisa impendulo ebalulekile futhi wenze ukuxhumana kube ngumgwaqo o-2 konke kusuka kuzinombolo zocingo ezaziwa endaweni! Faka izinombolo zasendaweni eziningi ku-akhawunti yomsebenzisi. Thumela imilayezo evela echibini lezinombolo zefoni ukusheshisa ukulethwa noma ukubambezela.
Izaziso ze-imeyili - Thola izaziso ezintsha ze-imeyili njengoba zenzeka noma ngokufingqiwe nsuku zonke. Futhi, thola izexwayiso ze-imeyili zebhalansi ephansi ukuze uhlale wazi ukuthi uzowagcwalisa nini amakhredithi akho.
Izifanekiso Zemiyalezo - Gcina imilayezo ye-SMS ejwayelekile noma esetshenziswa kaningi ukuze ungadingi ukufaka umyalezo ofanayo kaninginingi. Mane ukhethe ukuthi iyiphi ithempulethi ongayisebenzisa futhi uyigcwalisele umyalezo.
Sakaza Kusuka Kwifoni - Uyabaleka? Akunankinga nhlobo! Uzoba nekhono lokukhipha imikhankaso yakho yokumaketha nge-SMS ngomlayezo wombhalo olula! Akunasidingo sokungena ku-akhawunti yakho ukuphatha le nqubo.
Amakhodi we-QR - Khiqiza amakhodi we-QR njengendlela yokuvala umkhankaso wakho wokumaketha ungaxhunyiwe ku-inthanethi ungene ku-inthanethi. Isoftware yethu iza ifakwe amakhodi amasha obhalisile nekhasi lewebhu le-URL QR.
Hlukanisa Oxhumana Nabo - Ngomsebenzi wethu wokuhlukanisa iqembu, ungakha kalula amaqembu ngaphakathi kohlu lwakho lokumaketha umbhalo. Lokhu kuhlelela oxhumana nabo ngamaqembu futhi kukuvumela ukuthi ugcine uhlelekile bonke ababhalisile bakho nokuthi bavelaphi!
Ukusakaza Ngezwi - Sakaza umyalezo wezwi koxhumana nabo! Kungaba thayipha umlayezo bese uhlelo luzoguqula umbhalo ube yizwi, noma ulayishe owakho umyalezo ngefayela le-MP3. Enye indlela enhle yokuxhumana nokugcina oxhumana nabo benza iminikelo yakho.
Layisha Uhlu Lwababhalisile Bakho - Ube nohlu lwe-SMS lokukhetha ukungena kusuka kwenye indawo ofuna ukuthuthela kulo? Uma unemvume ebhaliwe ecacile evela kwababhalisile bakho ukuthi bavumile ukuthola imilayezo evela kuwe, ungalayisha nohlu lwakho. Senze leyo nqubo yaba lula ngendlela emangalisayo!
Ivoyisimeyili / Ukudlulisela Ucingo phambili - Imeyili yezwi nekhono lokudlulisa ucingo. Yiba nenketho yokuthi izingcingo zakho ziye ngqo ku-voicemail, lapho ungazilalela khona ngaphakathi kwephaneli yokulawula, noma izingcingo zakho zithunyelwe kunoma iyiphi inombolo oyifisayo!
I-SMS eya ku-imeyili / i-imeyili ku-SMS - Thola izaziso ze-imeyili lapho othile ethumela okuthile enombolweni yakho eku-inthanethi (i-SMS iye ku-imeyili). Ungabe usuphendula ngqo kuleyo imeyili evela kuklayenti lakho le-imeyili, isistimu izothatha leyo imeyili, bese ithumela umbhalo emuva (I-imeyili ku-SMS). Ithuluzi elikhulu futhi eliwusizo kakhulu!
Igama ne-imeyili Capture - Iba nenketho yokuqoqa igama ne-imeyili yomuntu obhalisile omusha ojoyina uhlu lwakho lokungena! Qoqa amagama ukuze wenze imilayezo yakho ye-SMS eqondene nawe kanye nama-imeyili uma ufuna ukuwaphromotha ngemikhankaso yakho ye-imeyili yokumaketha.
Imininingwane Management - Ilula kakhulu ukusebenzisa uhlelo lokuphathwa koxhumana nabo eliqukethe oxhumana nabo / ababhalisile. Sesha futhi uphathe bonke ababhalisile bakho lapha.
Imiklomelo yokuthembeka kwe-SMS Punch Card - Khohlwa lawo makhadi wesibhakela asendulo futhi ajwayele ukulahleka. Nikeza imivuzo yokwethembeka ye-SMS “punch card” kumakhasimende akho futhi wakhe ukwethembeka kumkhiqizo wakho ukuze ugcine amakhasimende ajabule futhi abuya.
I-Kiosk Builder - Idiyoski lokwethembeka ledijithali iyithuluzi lokusika elikuvumela ukuthi udale isibonisi esisebenziseka kalula. Inikeza amakhasimende akho asesizeni ngesibonisi esisebenziseka kalula - ebavumela ukuthi bajoyine iklabhu elihambahambayo, bangene ohlelweni lokwethembeka, futhi babheke isimo sabo samanje.
API - Finyelela izici ezibaluleke kakhulu zepulatifomu ye-UltraSMSScript nge-API. Ukuhlanganisa i-UltraSMSScript API kuhlelo lwakho lokusebenza kuzokunika amandla wokunweba ukusebenza kwepulatifomu kuhlelo lwakho lokusebenza!
Ukuhlanganiswa Kwe-imeyili - Uma ukuthwebula i-imeyili kuvuliwe, engeza ngokuzenzakalelayo ama-imeyili ezinsizakalweni zakho ze-imeyili eziyintandokazi njenge I-Mailchimp, aWeber, GetResponse, I-ActiveCampaign, noma I-Sendinblue! Konke kusingathwa ngaphandle komthungo ngemuva kwezigcawu.
Ifeksi eku-inthanethi - Thumela futhi wamukele amafeksi phakathi kwe-UltraSMSScript nomshini wefeksi! Thutha imanuwali, inqubo engaxhunyiwe ku-inthanethi yokuthumela ngefeksi bese uguqulela kumadokhumenti efeksi uwenze ulwazi lwesofthiwe kuyilapho unikeza amabhizinisi ukuguquguquka okwengeziwe ngokusuka kuhadiwe endala yefa.
Khetha ukungena kabili - Amandla wokukhetha ukungena kabili okuthi uma uvuliwe, abantu bazothola umlayezo wombhalo owengeziwe obacela ukuthi baphendule ngo- “Y” ukuqinisekisa ukubhalisa kwabo. Ukukhetha ukungena kabili akuphoqelekile, noma kunjalo, kunconywa kakhulu ezimweni ezithile kuya ngokuqukethwe kwemilayezo ozobe uyithumela.
Ngenguqulo efakiwe ye Iskripthi se-PHP, uzothola yonke ikhodi yomthombo yokukuvumela ukuthi ushintshe izinto zokwakha ezingaphambili uma ufisa ukuyinika noma yikuphi ukubukeka nokuzizwa ufisa. Kodwa-ke, iningi lamafayela wokugcina asemuva azofakwa ikhodi. I-UltraSMSScript kusebenzisa ioncube ukufaka ikhodi futhi unikeze amafayela amafayela. Izinkampani eziningi zokubamba sezivele zifakwe i-ioncube loader futhi yanikwa amandla ngoba i-ioncube iyindinganiso yemboni yokuvikela amafayela abucayi. Kumaphakeji we-Level 4 & ULTRA weskripthi, uzothola i-100% yekhodi yomthombo futhi, empeleni, usayina isivumelwano esingabuyiseli esithe ngeke uphinde uthengise iskripthi uqobo.
Thenga i-UltraSMSScript Manje!
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kule ndatshana.
Tags: AWebersms ngobuningiukudlulisela phambili ucingoimeyili ku-smsGetResponseukunciphisa isixhumanisiizinombolo ze-sms zendawoi-mailchimpMMSifeksi eku-inthanethiphp scriptAmakhodi we-QRI-SendinBlueizibalo ze-smsisms autoresponderi-sms botingxoxo ye-smsoxhumana nabo be-smsama-sms amakhuphoniamagama angukhiye e-smsi-sms kioskuhlelo lokuthembeka lwe-smsama-sms pollsukuhlukaniswa kwe-smssms ukuze imeyiliiwijethi ye-smsukusakaza ngezwiukumaketha ngezwiipulatifomu yezokumaketha ngezwiI-VoiceMail
Amakhasi okuhamba phambili: Qoqa Ukuhola Ngamakhasi Okufika Aphendulayo, Ama-Popups, noma Amabha Okwexwayisa
Amamethrikhi Okumaketha Nge-imeyili: Izinkomba Zokusebenza Ezingu-12 Eziwukhiye Okufanele Uziqaphe